‘अनलाइन गेम’ पब्जी माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतको ‘कपी-पेस्ट’ सैलीमा ‘फौजी’! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, २२ भाद्र सोमबार १०:२३
अभिनेता अक्षय कुमारसंग सहकार्य गरी एक भारतीय कम्पनीले पब्जी जस्तै मोबाइल गेम बजार ल्याउने घोषणा गरेको छ । जसको उद्देश्य बजारमा उत्पन्न ‘अनलाइन गेम’ सम्बन्धित रिक्ततालाई पुर्ति गर्नु हो । भारत सरकारले चीनले उत्पादन गरेको ‘अनलाइन गेम’ पब्जी माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमा अनलाइन गेम खेल्न रुचाउनेहरुको लागि यो गेम ल्याउन लागिएको हो । ब्याङ्गलोरमास्थित एन कोर खेलहरू नामको कम्पनीले यस मोबाइल खेललाई तयार पारेको छ, जुन पब्जीसंगको सीधा प्रतिद्वन्द्वी ठानिएको छ ।
कम्पनीले खेलको नाम ‘फौजी’ राखेको छ जुन अक्टोबरको अन्त्य सम्म बजारमा आउने आंकलन गरिएको छ । कम्पनीका सह-संस्थापक विशाल गोंडालले समाचार एजेन्सी रॉयटर्सलाई भनेका छन्, निडर र संयुक्त गार्ड्स यस खेलको पूरा नाम हो। यो गेमको निर्माण कार्य धेरै महिनादेखि भइरहेको थियो । यो खेलको पहिलो तह हामीले गल्भान भ्यालीमा आधारित रहेर बनाएका थियौँ, उनले भने । गालवान उपत्यकामा नै चीन र भारतका सिपाहीहरूबीच जून महिनामा पहिलो मुठभेड भएको थियो । जसमा कम्तिमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यसबेलादेखि दुई देशबीच तनाव जारी छ।
PREVIOUS Previous post: काठमाडौं उपत्यकामा दसैंसम्म निषेधाज्ञा लगाएर उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्न नाकामा सेना परिचालन गरिने
NEXT Next post: ‘नेपाली जनता भाेकै छन, राष्ट्रपतिदेखि शिक्षकसम्मको तलब-भत्ता रोक्नु पर्छ’ – डा. बाबुराम भट्टराई